Kubota (G.B.S.) Co.,Ltd (KGC)
ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၏ ကုမ္ပဏီခွဲ တစ်ခုဖြစ်သည့် KUBOTA (G.B.S) CO.,LTD. အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီအဖြစ် မတည်ထောင်သေးခင် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အချိန်ကတည်းက ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) ကုမ္ပဏီ လက်အောက်တွင် KUBOTA နှစ်ဘီးထွန်စက်များနှင့် တစ်လုံးထိုး စလင်ဒါ ဒီဇယ်အင်ဂျင်များ အား ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းအား ထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့ပြီး တောင်သူဦးကြီး များအတွက် လယ်ယာမြေထွန်ယက်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ရိတ်သိမ်းခြင်းများအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါး၍ စပါးအထွက်တိုးစေသော ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် KUBOTA စက် အမျိုးအစားများဖြစ်သော လေးဘီးထွန်စက်များ၊ ကွန်ဘိုင်းရိတ်သိမ်း ခြွေလှေ့စက်များ၊ အသေးစား မြေတူးစက်များနှင့် စပါးစိုက်စက်များကိုပါ ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ တွင် ကူဘိုတာအရောင်းဌာနသည် သုံးစွဲသူဦးကြီးများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် KUBOTA (G.B.S) CO.,LTD. အဖြစ် သီးခြား ကုမ္ပဏီတစ်ခု အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်၊ မကွေး၊ ညောင်တုန်း ၊ မြစ်ကြီးနား နယ်တို့တွင် အထူးတရား၀င်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရရှိထားပါသည်။ ထိုနယ်များတွင် အရောင်းခန်းမများ တည်ဆောက်လျှက် စက်များရောင်းချခြင်း၊ စက်အသုံးပြုနည်းသင်ပြပေးခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ စက်ထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်းပေးခြင်း နှင့် အပိုပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ ထပ်မံ၍ စက်ပစ္စည်း ရောင်းချပေးခြင်းများကို ရွှေဘို ၊ မုံရွာ နှင့် ပြည် တို့တွင်လည်း ဖွင့်လှစ်၀န်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိသည့်အပြင် အမြို့မြို့ အနယ်နယ်ရှိ Good Brothers အရောင်းဆိုင်များမှ တဆင့်လည်း ၀န်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။
လက်ရှိတွင် KUBOTA (G.B.S) CO.,LTD. သည် ရောင်းပြီးဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းတွင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ဆားမလောက် နှင့် မကွေး ရုံးများ၌ ISO 9001:2008 ဝန်ဆောင်မှု အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များရရှိထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စက်ပြင်ဝန်ဆောင်မှုကို ဝယ်သူအိမ်အရောက် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ အကြီးစားပြင်ဆင်စစ်ဆေးလိုသော စက်များအတွက်လည်း ဆားဗစ်စင်တာတွင် လာရောက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် ကုမ္ပဏီမှ ကားများဖြင့်သယ်ယူပြင်ဆင်ပေး လျှက်ရှိပါသည်။
အပိုပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုကို ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေးတွင် အထိုင်ထားလျှက် တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဖြန့်ချီ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပြီး စစ်မှန်သော အပိုပစ္စည်းများကိုသာ တင်သွင်းရောင်းချပေးလျှက်ရှိသည်။ ဝေးလံသော ဝယ်သူများ အတွက် ဘဏ်မှ ငွေလွှဲပြီး တစ်နေ့ (၂) ကြိမ် ကားဂိတ်အရောက်ပို့ ပေးလျှက်ရှိသည်။ အပိုပစ္စည်းများကို Kubota (G.B.S) Facebook Page မှတဆင့်လည်း မှာယူနိုင်ပါသည်။ အပိုပစ္စည်း အရောင်းစင်တာများကိုလည်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ဧရာဝတီ၊ မကွေး၊ နေပြည်တော်၊ ရွှေဘို၊ မုံရွာ၊ တန့်ဆည် ပြည် နှင့် မြစ်ကြီးနား တို့တွင်လည်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။
စက်သုံးပြီး ကြာသော ဦးကြီးများနှင့် စက်အသေးမှ အကြီးသို့သော်လည်းကောင်း၊ အကြီးမှ အသေးသို့ သော်လည်းကောင်းပြောင်းလဲလိုသော စက်ပိုင်ရှင်များအတွက် စက်ဟောင်းပေး အသစ်ယူ စနစ်ကိုလည်း ကျွန်တော်များ ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အသုံးပြုနေစဥ် ပျက်စီးပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကြာမြှင့်စွာ ရပ်နားလိုက်ရသော စက်များအတွက် စက်အစားထိုး ပေးထားသော ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသည်။
စက်တစ်စီး၏ အသက်ဖြစ်သော ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ဝယ်သူများ သေချာသိရှိစေရန် စက်ထိန်း သိမ်းနည်း သင်တန်းများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။ စက်ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းနည်း သင်တန်းများကို ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ပူးပေါင်း၍ သော်လည်းကောင်း KUBOTA (G.B.S) CO.,LTD. ၏ Training Center များတွင်သော်လည်းကောင်း တောင်သူများလုပ်ငန်းပါးချိန်တွင် စီစဥ် ပေးလျှက်ရှိသည်။
မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အတွက် အဓိက လိုအပ်လျှက်ရှိသော လေးဘီးထွန်စက်နှင့် ရိတ်သိမ်းချွေလှေ့စက်များကို အရောင်း၊ အပိုပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေး လျှက်ရှိပါသည်။ ရှေ့ဆက်ပြီး စပါးစိုက်စက်များ၊ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်များတွင် အသုံပြုသော မြေတူးစက်များကိုလည်း ရှေ့ဆက် ရောင်းချခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် KUBOTA (G.B.S) CO.,LTD. သည် ကူဘိုတာ အမှတ်တံဆိပ် စက်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် စျေးကွက်တွင် ဦးဆောင်သူအနေဖြင့် ရပ်တည် လျှက်ရှိပါသည်။